ဒီနေ့အပြင်ထွက်ကြမယ့် ပြည်သူအားလုံးကို အထူးသတိထားကြဖို့နဲ့ ဂရုစိုက်ကြဖို့ မှာလိုက်ချင်ကြောင်း နှလုံးသားထဲက ချစ်ချင်းများစွာနဲ့ သတိပေးလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်လ် သဇင်ဦး – Shwe Ba
ဒီနေ့အပြင်ထွက်ကြမယ့် ပြည်သူအားလုံးကို အထူးသတိထားကြဖို့နဲ့ ဂရုစိုက်ကြဖို့ မှာလိုက်ချင်ကြောင်း နှလုံးသားထဲက ချစ်ချင်းများစွာနဲ့ သတိပေးလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်လ် သဇင်ဦး
Shwe Ba | February 8, 2021 | Cele News | No Comments
သွယ်လျ တဲ့ အမိုက် စား ခန္ဓာ ကိုယ်လေး ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ဆက်ဆီ သဇင်ဦးကို သိကြ မယ် ထင် ပါတယ် ။ ဆွဲမက်ဖွယ် ရင်သပ် ရှုမောစရာ အမိုက်စား ပုံရိပ် လေးတွေ နဲ့ ပုရိသ တွေရဲ့ ရင်ကို ဆွဲဆောင် ညို့ယူ ထားတဲ့ အလန်းစား မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင် လေးဖြစ် ပါ တယ် ။ သွယ်လျ ပြေပြစ် တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အတူ လှပကြည်လင် တဲ့ အသား အရေ ကိုပါ ပိုင် ဆိုင် ထားပြီး ဆက်ဆီ ကျတဲ့ သူမရဲ့ အမိုက်စား ပုံတွေ နဲ့ ညို့အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင် နိုင်သူလေး လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။
သူမ ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ် နဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ ဗီဒီယို လေးတွေကို လူမှု ကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ် ပေါ်တွင် အများ ဆုံး တင်လေ့ ရှိတာ လည်း တွေ့ရပါ တယ် ။ လတ်တ လောမှာ တော့ သူမ ရဲ့ အမိုက်စား အလှတရား တွေနဲ့ ညို့ယူ ဖမ်းစား ထားတဲ့ အလန်း စား ပုံလေးကို ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ပုံလေး ဟာ ကြည့်ရှု သူတွေ များပြား ခဲ့တာဖြစ် ပြီး ပုရိသတွေ အများဆုံး ဝန်းရံခြင်း ခံနေရ တာလည်းဖြစ်ပါ တယ် … .
သူမရဲ့ ပရိသတ် တွေကို သတိပေး စကားပြောလိုက်တာ ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီမနက်အပြင်ထွက်ရင် အားလုံးသတိထားကြဖို့ မှာချင်ပါတယ် ချစ်ခြင်းများစွာ ဖြင့် “ သဇင်ဦး ”🙏 ဆိုပြီး တင်ပေး လာတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် နော် … .
သြယ္လ် တဲ့ အမိုက္ စား ခႏၶာ ကိုယ္ေလး ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ ဆက္ဆီ သဇင္ဦးကို သိၾက မယ္ ထင္ ပါတယ္ ။ ဆြဲမက္ဖြယ္ ရင္သပ္ ရႈေမာစရာ အမိုက္စား ပုံရိပ္ ေလးေတြ နဲ႔ ပုရိသ ေတြရဲ့ ရင္ကို ဆြဲေဆာင္ ညိဳ႕ယူ ထားတဲ့ အလန္းစား ေမာ္ဒယ္လ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေလးျဖစ္ ပါ တယ္ ။ သြယ္လ် ေျပျပစ္ တဲ့ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ အတူ လွပၾကည္လင္ တဲ့ အသား အေရ ကိုပါ ပိုင္ ဆိုင္ ထားၿပီး ဆက္ဆီ က်တဲ့ သူမရဲ့ အမိုက္စား ပုံေတြ နဲ႔ ညိဳ႕အား ျပင္းျပင္း ဆြဲေဆာင္ နိုင္သူေလး လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။
သူမ ရဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ နဲ႔ ဆက္ဆီ က်က် ဗီဒီယို ေလးေတြကို လူမႈ ကြန္ယက္ ေဖ့ဘြတ္ ေပၚတြင္ အမ်ား ဆုံး တင္ေလ့ ရွိတာ လည္း ေတြ႕ရပါ တယ္ ။ လတ္တ ေလာမွာ ေတာ့ သူမ ရဲ့ အမိုက္စား အလွတရား ေတြနဲ႔ ညိဳ႕ယူ ဖမ္းစား ထားတဲ့ အလန္း စား ပုံေလးကို ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ပုံေလး ဟာ ၾကည့္ရႈ သူေတြ မ်ားျပား ခဲ့တာျဖစ္ ၿပီး ပုရိသေတြ အမ်ားဆုံး ဝန္းရံျခင္း ခံေနရ တာလည္းျဖစ္ပါ တယ္ … .
သူမရဲ့ ပရိသတ္ ေတြကို သတိေပး စကားေျပာလိုက္တာ ပဲျဖစ္ပါတယ္ ဒီမနက္အျပင္ထြက္ရင္ အားလုံးသတိထားၾကဖို႔ မွာခ်င္ပါတယ္ ခ်စ္ျခင္းမ်ားစြာ ျဖင့္ “ သဇင္ဦး ” ဆိုၿပီး တင္ေပး လာတာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ေနာ္ … .